Igagasi lokushisa elibi kakhulu laseShanghai eminyakeni eyi-145 libulala abane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Xinhuanet.com
Ngesikhathi sehlobo ezingxenyeni eziningi zomhlaba i-mercury kuma-thermometer inyuka iye kumanani aphezulu kakhulu, kepha lapho ukushisa kuhlanganiswa namazinga aphezulu okungcoliswa, umuzwa oshisayo ungaba ngamadigri amaningana ngaphezulu.
EShanghai (China), babhekane nokushisa okukhulu kakhulu eminyakeni eyi-145. Ngokushisa okuphezulu okungama-40ºC, umswakama ophezulu kanye nokungcola, umzimba unemizwa engu-9ºC. Kube buhlungu kakhulu lokho Abantu abane balahlekelwe yimpilo yabo.
El NgoLwesibili Idolobha likhiphe isexwayiso sesithathu esibomvu sonyaka ngenxa yamazinga okushisa aphezulu, ngenxa yokuthi i-thermometer ifinyelele kuma-40,9ºC, ngaleyo ndlela yaba yi usuku lwesine olushisa kakhulu selokhu amarekhodi aqala ukuqoshwa, eminyakeni eyi-145 eyedlule. Lokhu kushisa okukhulu kudale ukulahleka kwabantu, ngokusho kwephephandaba lendawo IShanghai Nsuku Zonke.
Okwamanje, kuyaziwa ukuthi kushone abantu abane, ngenkathi inqwaba yazo, asebekhulile ababesemgwaqweni, emakhaya abo ngaphandle kwezinhlelo zokungenisa umoya, noma abasebenza ngenkathi bevezwe yilanga balaliswe esibhedlela ngenxa yokushiswa ukushisa noma ezinye izifo.
Futhi ukuthi ukuhlala elangeni eligcwele ngaphandle kokuvikelwa ehlobo, futhi ikakhulukazi, ngesikhathi se- ukushisa, Kungasenza silahlekelwe ukwazi, futhi singase sihlupheke ngisho nenhliziyo noma ukwehluleka ukuphefumula, i-pulmonary noma i-edema yobuchopho, nokuhluleka komzimba.
Ukugwema izinkinga, kubaluleke kakhulu ukuthatha izinyathelo eziningi, okuyilezi:
Gwema ukuzibeka elangeni eliqondile ngezikhathi ezishisa kakhulu.
Zivikele emisebeni yelanga ngokugqoka isigqoko, izibuko zelanga nelanga.
Phuza amanzi amaningi, noma ngabe asomile.
Kepha ngaphezu kwalokho, kufanele yeka ukufudumala kwembulunga yonke uma singafuni ukuthi kufe abantu abaningi ngenxa yamazinga okushisa aphezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Igagasi lokushisa elibi kakhulu laseShanghai eminyakeni eyi-145 libulala abane
I-NASA iphakamisa uhlelo lokuziqhenya ukuze ... Ihlise amaMeteorite!
Iziphepho ezinkulu emhlabeni kanye nerekhodi leMaracaibo